I-Lenovo ikhokelela kwindlela yokutshaja i-Apple Magic Mouse | Ndisuka mac
Njengoko ndiyithandayo i-Apple Magic Mouse, akunakwenzeka ukuba baqonde ukuba babenalo njani "uluvo oluqaqambileyo" lokubeka Ukutshaja izibuko emazantsi emouse ukushiya umda kungenanto kwaphela xa kuhlawuliswa.
Ngale ndlela kufuneka sithi utshintsho luka-Apple kule Magic Mouse lwenzeke ngexesha abafuna ukongeza ibhetri egcwalisekayo ukubuyisela iibhetri eziqhelekileyo. Le yinto enokulungiswa ixesha elide kodwa Khange silubone naluphi na utshintsho kwindlela yokutshaja nakwindawo ekuyo lezibuko.
ILenovo yazisa ngeMouse engenazingcingo ngaphandle kokutshaja ngaphandle kwamacingo
Kwaye kubonakala ngathi ayinzima kangako ukongeza ugqatso olunentambo kwimida yangaphandle njengoko sibonile okanye sibona nezinye iimveliso. Ngoku ILenovo isandula ukwazisa ngeLenovo GO yayo, impuku nge Ukutshaja ngaphandle kwamacingo kwaye ayinazingcingo kwaphela.
Ukongeza, le mouse intsha yeLenovo ivumela okanye iyahambelana nokutshaja kweQi ukuze nasiphi na isiseko sokutshajisa sihambelane. ngokwenene kukho iichwethi zokutshaja ezifana ne-mat ukuze sibize imouse ngelixa siyisebenzisa. Kodwa kule meko iLenovo ikongeza uhlobo "lwangaphandle" apho ndinokukhupha khona iMouse yakho kunye nezinye izinto zokubulela ngenxa yamazibuko e-USB C ayibandakanyayo.
Asikaqondi ukuba iApple kwisizukulwana esitsha seMac khange idibanise okanye iguqule izibuko lokutshaja kwiMouse yeMagic (kunye nokudibanisa imibala emihle) ukuvumela ukutshaja ngelixa unxibe. Ukuba awufuni ukongeza ukutshaja ngaphandle kwamacingo ubuncinci tshintsha indawo yezibuko ukuze abasebenzisi bakwazi ukuyihlawulisa ngelixa bayisebenzisa ...
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Lenovo ikhokelela kwindlela yokutshaja i-Apple Magic Mouse